मोबाइल हरायो? एक मिनेटमै पत्ता लगाउन सकिन्छ - Everest Dainik - News from Nepal
मोबाइल हरायो? एक मिनेटमै पत्ता लगाउन सकिन्छ
काठमाडौंः मोबाइ आजभोलि अत्यावश्यकीय बस्तु जस्तै बनेको छ । हरेक मानिसको हातहातमा मोबाइल छ । त्यसमा पनि एन्ड्रोइड र आइओएस सफ्टवेरयका महंगा मोबाइलको प्रयोग बढ्दो छ । १० हजार भन्दा माथि देखि लाखौं मूल्यको मोबाइल फोनहरु बोक्नेको मानिसको संख्या निकै धेरै रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भन्सार जाँचपास अब मोबाइलबाटै
iphone का प्रयोगकर्ताले icloud को मद्दतमा हराएको डिभाइस खोज्न सक्दछ।